12 Nyaya Surfside Condo Kuvaka paCollins Ave muFlorida kwakadonha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 12 Nyaya Surfside Condo Kuvaka paCollins Ave muFlorida kwakadonha
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Imba yakapunzika muSurfside, Florida
Mushure mehusiku chivakwa chine gumi nembiri muFlorida resort guta Surfside chakadonha. Chikonzero hachizivikanwe. Hazvizivikanwe kuti mangani kukuvara kunogona kutarisirwa.
Chivako pa 8777 Collins Ave muSurfside, Miami, Florida chakakoromoka mangwanani eChina mangwanani
Dzinopfuura makumi masere mota dzekukurumidzira dziri panzvimbo
Vakaona vanoti chivakwa ichi iSolara Surfside Resort, asi mapurisa akasimbisa kero yeChamplain Tower South, chivakwa chekugara.
Mumwe anoona pachiitiko cheakawanda-nhurikidzwa chivakwa chakapunzika muSurfside akati chivakwa chakapunzika muna 88th Street neCollins muMiami ndipo panowanikwa Solara Surfside Resort, Bluegreen Zororo. T
Aya mashoko anoita seasina kunaka. Sekureva kweMiami Police department scanner, iyo nzvimbo iri 8777 Collins Ave muSurfside, ndeipi nzvimbo yeChamplain Towers South, chivakwa chegumi nenhatu chekugara Condo chivakwa.
Champlain Towers Maodzanyemba, Surfside, Florida
Vagari vemo vanoti chivakwa chiri mu "Millionaire's Row" - zvakare ipo pamhenderekedzo.
Iyi inyaya irikubuda. Hazvizivikanwe kuti vangani kana paine munhu akakuvara kana kufa muchiitiko ichi chiri kuitika. Sezvo izvi zvakaitika pakati pehusiku, zvinogona kutora nguva kuti uwane kuongororwa kwakajeka kwemamiriro ezvinhu aya.
Mumwe mukadzi paFacebook anoti aive muchivakwa padhuze. Akabviswa uye pari zvino ari pane imwe nzvimbo yekutandarira iri pedyo Surfside, FL
YAKO: Chivakwa chakakoromoka kumahombekombe Florida pedyo neMiami Beach
- Insider Pepa (@TheInsiderPaper) June 24, 2021